Passione – Studio – MMANIME
Higurashi: When They Cry – New ၁၉၈၃ ခုနှစ် နွေရာသီလောက်မှာ Hinamizawa ဆိုတဲ့ရွာသေးသေးလေးကို Keiichi Maebara ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ပြောင်းလာခဲ့တယ် ရောက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာဘဲ Rena Ryuuguu ရယ် Mion Sonozakiရယ် Satoko Houjou နဲ့ Rika Furude လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေး ၄ ယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာကြတယ် အတူတူသွားအတူတူလာ အတူတူဆော့ကြနဲ့အရမ်းကိုခင်ကြမင်ကြပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်…. သို့သော်ဒီပျော်စရာနေ့လေးတွေဟာရည်ရှည်မခံခဲ့ပါဘူး တနေ့မှာတော့ Keiichi တယောက်လူတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောရင်း ဒီရွာဟာသူထင်သလိုအေးချမ်းတဲ့ရွာမဟုတ်ဘဲ နတ်ဆိုး ဝိညာဉ်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလာရတယ် အထူးသဖြင့် cotton drifting festival လို့ခေါ်တဲ့ဝါဂွမ်းမျှော်ပွဲတော်ညမှာ လူတယောက်သေဆုံးလေ့ရှိတယ်ဆိုအဖြစ်ပျက်ဆိုးကြီးပေါ့….မင်းသားကသူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုမေးတော့လဲမသိသလို မဖြစ်သလိုခါးခါးသီးသီးငြင်းကြတယ်….သူတို့ဘာလို့လျှိုဝှက်ထားတာလဲ မင်းသားကရောသူတို့ကိုအရင်လိုဆက်ခင်နေအုံးမှာလား ဒီသေဆုံးမှုကြီးကရော ဘာတွေနဲ့ဆက်စပ်လို့လဲဆိုတာကို ဇာတ်ကားလေးမှာအဖြေရှာကြည့်ပါ…… With the crying sound of cicadas, the evil will visit you… Original Name - ひぐらしのなく頃に Status - Returning Series Network - ...
Interspecies Reviewers Ishuzoku Reviewers Uncensored (Myanmar Sub) Total episode-12 Translator-Jeno Encoder-Shu Inaworld bursting at the seams with moe monsters and humanoids of the horned sort, which brave heroes will take it upon themselves to review the beastly babes of the red-light district? Can only one be crowned the ultimate title of best girl? Behold the most tantalizing of trials. Mediafire Download Link ⬇️ Episode 1 Episode2Episode ...
Wasteful Days of High School Girls Joshikousei no Mudazukai အမည္ - အထက္တန္းေက်ာင္းသူမေလးမ်ား၏အက်ိဳးမ႐ွိ ေန႔ရက္မ်ား အမ်ိဳးအစား - Comedy,School ထုတ္လႊင့္မည့္အပိုင္း - ၁၂ ပိုင္း ျပသေသာရက္ - Jul 5, 2019 to ? ႀကာခ်ိန္ - 25 မိနစ္ ဇာတ္လမ္းအညႊန္း Tanka ဆိုတဲ့အထက္တန္းေက်ာင္းသူမေလးဟာ တစ္ေန႔ေက်ာင္းတက္ရင္းပ်င္းရိလာတာေႀကာင့္ အေပ်ာ္အေနနဲ႔ သူမရဲ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုနာမည္ေျပာင္မ်ားလိုက္ေပးပါတယ္။ဒါေပမဲ့သူတို႕ေတြကလည္းအားက်မခံဘဲ သူ႕ကိုပါနာမည္ေျပာင္လိုက္ေပးလိုက္ပါတယ္။Sakuchi ဆိုတဲ့သူ႕သူငယ္ခ်င္း Otaku မေလးကို " Ota" ၊Saginomiya ဆိုတဲ့ဆက္ဆံေရးေအးတဲ့ေကာင္မေလးကိုက် " Robo" အစ႐ွိတဲ့နာမည္ေျပာင္မ်ားေပးျပီးသူ႕ကိုက် "baka" လို႔ေပးထားႀကပါတယ္။ဒီလိုနဲ႔အခ်င္းခ်င္းစေနာက္ရင္းဘယ္လိုမ်ား သူတို႕ရဲ႕ ပ်င္းရိစရာေက်ာင္းတက္ရက္ႀကီးကိုကုန္ဆံုးႀကမယ္ဆိုတာကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ႀကည့္ႀကပါ။ Episode 01 Episode 02 Episode 03 Episode 04 Episode 05 Episode 06 Episode 07 Episode 08 Episode 09 Episode 10 Episode ...
Z/X: Code Reunion Name : Z/X Code Reunion Source : Manga Genres :Adventure,Fantasy,Game,Sci-Fi Total Episode : Unknown Run Time : 24 minutes Release Date :Oct 8 2019(Ongoing) Review Black Pointsလိုခေါ်တဲ့တစ်နေရာကနေအခြားတစ်နေရာကိုသွားလာနိုင်တဲ့ဂိတ်ပေါက်တွေဟာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အဲ့ဂိတ်ပေါက်ကနေZ/Xလို့ခေါ်တဲ့သူတွေဟာကမ္ဘာကြီးကိုရောက်လာပြီးစစ်ပွဲတွေဖန်တီးပါတယ်။ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းတော့လူသားတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရယူခဲ့ပါတယ်။Azumi Kakamigaharahလို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးဟာ z/x တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Rigelနဲ့ပါတနာဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။သူ့လိုပဲအခြားz/xတွေကလည်းအသီးသီးပါတနာတွေရှိကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ Fujimisaki Academyကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံရပါတယ်။အဲ့academyကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးအမည်မသိရန်သူတွေဟာacademyကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်။Z/Xတွေကဘယ်လိုအစွမ်းတွေရှိပြီးဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ။Academyကရောဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲသိချင်ရင်တော့အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းpageမှာစောင့်ကြည့်ကြပါ။ Episode 01 Episode 02 Episode 03 Episode 04 Episode 05 Episode 06 Episode 07 Episode 08 Episode 09 Episode 10 Episode 11 Episode 12